Xai Yak Techonology: April 2012
ဆရာမ မရှိတော့ ပွတ်လောရိုက်နေကြ၏။ မကြာခင်မှာတစ်ကျောင်းလုံးကကြောက်သော မျက်နှာထားတင်းတင်း ဆရာမ အတန်းထဲဝင်လာ၏။ မီးကိုရေနဲ့ ငြိမ်းလိုက်သလို ချက်ချင်း တိတ်ဆိတ်ငြိမ်ကျသွား၏။ "ဂွတ်မောနင်း တီချာ" ' ဘာလဲ၊ မင်းတို့က ဒါပဲတက်သလား၊ နေ့ခင်း ညနေခင်း တစ်နေ့လုံးအတွက်ပါသွားအောင် မပြောတက် ကြတော့ဘူးလား' ထိုအခါ တပည့်လေးများက "ဂွတ်မောနင်း၊ အားဖတားနွန်း၊ အီးဗီးနင်း "ဟု ညီညီညာညာ ရွတ်ပြလိုက်ကြ၏။ 'မကောင်းဘူးရှည်တယ်၊ တစ်နေ့လုံးပါသွားအောင် အကောင်းဆုံး စဉ်းစားကြ' ခဏကြာတော့ တပည့်လေးများက "ဂွတ်ဟိုးလ်ဒေး တီချာ" အေး၊ အဲဒါမှန်တယ်၊ ကဲ စာသင်မယ်၊ ငါက စကားတစ်လုံး၊ ဒါမှမဟုတ် ၀ါကျတစ်ကြောင်း ရွတ်ပြလိုက်မယ်၊ မင်းတို့က ဆန့်ကျင်ဘက် ၀ါကျကို ပြန်ပြောရမယ်၊ ကဲ စပြီ ၊ လိမ်မာသော... တပည့်လေးများက မဆိုင်းမတွပင် မိုက်သော ဟု ညီညီညာညာ ပြောလိုက်ကြသည်။ ဆရာမက' မြင့်သော' တပည့်လေးများက "နိမ့်သော"
'ကျဉ်းသော' "ကျယ်သော" '၀သော' "ပိန်သော" 'ပေါ်ပျူလာဖြစ်သော' "ပေါ်ပျူလာမဖြစ်သော" 'မဟုတ်ဘူး၊ မှားတယ်' "ဟုတ်တယ်၊ မှန်တယ်" 'ဟာ၊ အမိုက်အမဲလေးတွေ" "ဟာ၊ အလိမ်မာကြီးတွေ" 'အို၊ ဘုရားသခင်' "အို၊ ကျေးကျွန်" 'ဟဲ့၊ ငါမေးနေတာ မဟုတ်ဘူး' "ဟဲ့၊ ငါဖြေနေတာ မဟုတ်ဘူး" 'အမလေး၊ သေတော့မှာပဲ' "အမလေး၊ ရှင်တော့မှာပဲ" 'ဟေ့ ရပ်တော့' "ဟေ့ စတော့" 'တော်ပြီ၊ သင်တန်းပြီးပြီ' "တော်သေးဘူး၊ သင်တန်းစပြီ" 'နင်တို့ဟာ နင်တို့ စစ မစစ ငါသွားပြီ' တပည့်များ ဆန့်ကျင်ဘက်ဝါကျ စဉ်းစားမရခင်မှာ ဆရာမ အတန်းအပြင်ဘက် ရောက်သွားတော့၏။
Posted by Xai Yak at 14:24 No comments:
Posted by Xai Yak at 12:57 No comments:
တောင်ကိုးရီးယား ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန က စမ်းသပ် ပစ်လွှတ်လိုက်သော ပဲ့ထိန်းတပ် ဒုံးကျည်အား တွေ့ရစဉ်။ မြောက်ကိုးရီးယား နိုင်ငံရှိ မည်သည့် ပစ်မှတ် မဆို ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိသည် ဟု ဆိုသည်။ ဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၁၂။
Ref: Tit Htoo Lwin
Posted by Xai Yak at 13:15 No comments:
Posted by Xai Yak at 12:59 No comments:
Posted by Xai Yak at 12:51 No comments:
Keygen တွေ Serial key တွေကို ရှာဖွေပေးတဲ့ software Craagle.4.0.FINAL
ဒီတစ်ခါတော့ Keygen တွေ Serial key တွေကို ရှာဖွေပေးတဲ့ software လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါ သည်။ No proxy သုံးတဲ့သူတွေကတော့ ရှာချင်တဲ့ serial key တွေ ကို search box မှာ ရိုက်ထည့် ပြီး ရှာရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ Proxy သုံးတဲ့သူတွေကတော့ အောက်မှာပုံနဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ်။ Box လေးမှာ Right Click နှိပ်ပြီး Option ထဲမှာ ပြင်ဆင်ရုံပဲဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ကြည့်ရှုကြပါ။ အောက်မှာပေးထားတဲ့ Download Link လေးမှ Download လုပ်နိုင်ပါသည်။
keygen သုံးတဲ့ software ဖြစ်လို rar ဖြည့်ပြီးတာနဲ antivirus ပိတ်ထားပေးပါ။
Posted by Xai Yak at 12:50 No comments:
အားလုံးသော ဟက်ကင်းဝါသနာရှင်များ ပညာရှင်များ မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ဆက်ပါရစေ။
ကျနော်အခု ဆွေးနွေးချင်တာကတော့ ဟက်ယောင်ကြောင် လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်
ကျနော်လဲအဲအထဲမှာ ပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ် (ရှက်လို့သာပြောတာ ဂယ်လည်းပါပါတယ်ဟီး)
အခု ဘယ်ဖိုရမ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ခင်ဗျ ဟက်ကင်းဆိုတာနဲ့ စိတ်ဝင်စားကြတာပါပဲ
မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမဟုတ် နိုင်ငံတကာမှာကောပဲခင်ဗျ. ခုကျနော်တို့ဆီမှာ ခေတ်စားနေတာက (mmitd မှာကောပဲ) Wi Fi hacking ကို
အရမ်းခေတ်စားနေတယ် အရင်တုန်းက လည်း Google Talk အကောင့်ကို ဟက်ချင်လို့ပါဆိုတဲ့ စကားတွေ ပို့တွေ Comment တွေ သိန်း သန်း မက .
တွေ့ခဲ့ရပါတယ် အဲ အောင်မြင်ကြပါသလား နိုး မအောင်မြင်ပါဘူး အောင်မြင်တယ်ဆိုတာလည်း အကြောင်းသုံးချက်ပါ
တစ်ခုက အကောင့်ပိုင်ရှင်စက်ကတဆင့်ဖြစ်ဖြစ် SQLT ကိုသိလို့ဖြစ်ဖြစ် တခြားသော Clone များဖြစ်ဖြစ်
နောက်တစ်ခုက တော့ အဆင့်မရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ နောက်မှ ခိုးကြည့်ခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျန်တဲ့တစ်ခုက တော့ လူအထင်ကြီးအောင်လို့ ဟက်နိုင်ယောင်ဆောင်ပြီး ရွီးနေတဲ့အချက်ပါ
အဲလို Google Account ကို ဟက်တာက တကယ်တော့ ကျနော်ပြောသလိုလောက်ပဲရတာပါ
မလွယ်ပါဘူး တော်ရုံလူဟက်နိုင်ဖို့က (မလွယ်တာနော် မရတာမဟုတ်ဘူး) Google Sever ကိုတောင်ဟက်နိုင်ရင်
အခု Wi FI ကတော့ အဲလိုမဟုတ်ဘူးဗျ ADMIN ရဲ့ Knowledge တွေ Skill တွေ SQLT တွေနဲ့ဆိုင်တယ်ဗျ
WEP ကိုတော့ ရပါတယ် MAC မကန့်ထားရင်နဲ့ သုံးတဲ့ User အနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး ရပါတယ်
ကျနော်စမ်းသက်တာလည်း 75% လောက်အောင်မြင်တယ် ကျနော်မြို့က လိုင်း တွေမှာ 75% လောက် ကိုကျနော်ရပါတယ်
ဒီတော့ Wi Fi ကိုဟက်တာဟာ အခက်ခဲကြီးမဟုတ်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်
WPA2 ကိုတော့ ခုထိမရဖူးပါ ကျနော်အခု ဒီပို့ကနေပဲဖိတ်ခေါ်ပါရစေ
ဟက်ကင်းဝါသနာရှင်များအတွက်သော်၎င်း ပညာရှင်များအတွက်သော်၎င်း စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
အခု Wi Fi ကို ဟက်တာအောင်မြင်တဲ့သူများကို တောင်းဆိုပါရစေ
အင်တာနက်လိုင်းရတာတော့ဟုတ်ပါပြီ Router ကို Configure လုပ်ဖို့ကိစ္စကို ခင်ဗျားတွေ ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီလား?
ကျနော်ဆိုလိုတာက Wi Fi ကို ဟက်တာအောင်မြင်ပြီဆိုပါတော့ Admin ခပ်ပိန်းပိန်းဆိုရင်တော့ ဟုတ်တာပေါ့
ခင်ဗျားတို့ကျနော်တို့လိုကောင်တွေဆိုရင် အနည်းဆုံး 3ရက်တစ်ခါတော့ Configure ၀င်လုပ်မှာပဲ အဲမှာ ဘယ်သူတွေသုံးနေတယ်ဆိုတာသိလို့
Block လုပ်နိုင်ပါတယ် အဲအတွက် ကျနော်တို့တွေဟာ Wi Fi ပတ်စ၀က်တာမက Router ရဲ့ Admin account ကိုပါသိဖို့လိုအပ်လာပါပြီ
ဖိတ်ခေါ်တယ်ဗျာ ကျနော်လည်း လေ့လာနေပါတယ်
နောက်တစ်ခုက ကျနော် 10 တန်းဖြေပြီး ကွန်ပျူတာဆိုင်မှာလုပ်နေတုန်းက အင်တာနက်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့သင်တန်းတစ်ခုသင်ဖူးတယ်ဗျ (လေကျယ်တာမဟုတ်ကြွားတာမဟုတ်ပါ)
အဲတုန်းက အဲတုန်းက သင်တန်းလာတက်တဲ့ အကိုကြီးနှစ်ယောက်စကားကြောင့် ကျနော် အခုလိုပြောင်းလဲခဲ့တာလဲပါတယ်ဗျ
သူတို့ပြောတာက ကျနော့်ကိုရည်ရွယ်တာတော့ဟုတ်ဝူးဗျ တချို့ကောင်တွေကတဲ့ ကွန်ပျူတာ ကို ၀င်ဒိုးလေး တင်တက်ရုံနဲ့ ဆရာကြီးဖြစ်နေပြီထင်တဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲတဲ့
အဲ ကောင်တွေက ၀င်ဒိုးတောင် ဘာမှန်းမသိ သူများလုပ်တာသင်တာပဲသိပြီးကိုတင်တဲ့ ၀င်းဒိုးတာ XP လား Vista လား Service Pack ဘယ်လောက်မှန်းမသိတဲ့ကောင်တွေတဲ့
နောက် ဆော့ဝဲတွေတောင်စုံအောင်မသွင်းတတ်တဲ့ကောင်တွေတဲ့ မှန်ပါတယ် တချို့ဆိုအခုထိ Patch မဖြည်တတ် Crack မဖြည်တတ်တာတွေ တပုံကြီးပါ
အဲတုန်းကလည်းကျနော်လည်း အဲလောက်မဆိုးပေမဲ့ အဲအကိုတွေပြောတဲ့စရင်းထဲမှာပါပါတယ် ဒါကြောင့်ပြင်တယ်လေ့လာတယ် မှတ်သားတယ် ခုလိုအခြေအနေထိရောက်အောင်ပဲဗျာ
အခုဆိုလဲ ဟက်ချင်ပြုချင်တဲ့သူတွေဟာ သူများကိုမဟက်ခင် ကို့အတွက်လုံချုံရေးကိုကို ကာကွယ်နိုင်လားဆိုတာကိုအရင်ဆုံးဆုံးဖြတ်ပါ
သူများကို ဟက်ချင်ရင် ကိုအဟက်မခံရအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ် ဟက်မယ်ဆိုရင်လည်း အလကားရတဲ့ဆော့ဝဲတွေစွတ်မသုံပါနဲ့
ကိုခံရနိုင်လို့ပါ အခုအခြေအနေဟာလည်း လူတိုင်းကဟက်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြတော့ မဟက်နဲ့လို့ပြောတာထက် အားလုံး ဆွေးနွေးတိုင်ပင် မျှဝေ ပြီးကူညီကြရင်
နှင်းရယ် လွမ်းတယ် နှင်းကိုမတွေ့တဲ့နေ့ဆို
အလွမ်းပြေဆိုလို့ ပုံရိပ်လေးတောင် ဖမ်းခွင့်မပေးခဲ့ပေမဲ့
Posted by Xai Yak at 17:40 No comments:
''အဲဒီဝေလငါးကြီးကို ရေလုပ်သားတွေက ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့ မွန်း တည့် ၁၂ နာရီမှာ စတွေ့ခဲ့တယ်။ တွေ့ပြီးတော့ အဲဒီရေလုပ်သားတွေက ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆီကို အကြောင်းကြားတယ်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဝေလငါးကြီးကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မြို့နယ်ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနကို ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဦးတို့ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနက အဖွဲ့တွေ သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်။ ရေတက်ချိန်နဲ့ကြုံလို့ လှိုင်းတွေပုတ်တဲ့အခါမှာ ကမ်းခြေဘက် ပိုရောက်လာတယ်။ လူ ၄၀ လောက်နဲ့ ၀ိုင်းတွန်းကြပေမယ့် ဝေလကြီးက လုံးဝမရွေ့သွားပါဘူး။ ဒီနေ့ ညနေပိုင်းမှာတော့ မော်တော်စက်လှေတွေနဲ့ ဆွဲဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ဦးတို့အနေနဲ့ကတော့ ဝေလငါးကြီး အသက်ရှင်ရေးအတွက်ပဲ ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမှာပါ''ဟု ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
Posted by Xai Yak at 17:16 No comments:
CD အခွေလေးပါတင်ပေးထားပါတယ် ဒေါင်းထားလိုက်ပါဦး
Google Chrome ကို သုံးပြီး အခြားကွန်ပျူတာ ကို ထိန်းချုပ်မယ်
1. သင့်စက်မှာ ထည့်ချင်ရင် ဒီမှာနှိပ်ဒေါင်းလိုက်ပါChrome Remote Desktop Extension Chrome Browser အတွက်ဖြစ်ပါတယ် size က 20 MB ရှိပါတယ်
2. ဒီ extension ကို စက်မှာထာ့်ပြီးရင် အောက်မှာပြထားတဲ့နေရာတစ် ခုခုကနေ ဖွင့်နိုင်ပါတယ်
3. ကျွန်တော်ကတော့ ဒီကနေပြပေးပါမယ်
4. Continue ကိုနှိပ်ပါ
5. Allow access ကိုနှိပ်ပါ
6. အခြားကွန်ပျူတာကိုရှယ်ဖို့ Share This Computer ကိုနှိပ်ပါ
7. ကုဒ်တစ်ခုကို သင်မြင်နေရပါမယ် သင်ထိန်းချုပ်လိုတဲ့ သင့် သူငယ်ချင်းကွန်ပျူတာကို အဲကုဒ်လေးပေးလိုက်ပါ
အဲကုဒ်လေးပေးလိုက်လို့ သင့်သူငယ်ချင်းကတော့ သင့်စက်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုပြီး ပျော်နေမည် ဟိဟိ, AccessaShared Computer ကိုသူနှိပ်တာနဲ့ အောက်ကပုံလေးသင့်စက်မှာ လာပေါ်နေမယ်
အဲ ကုဒ်တွေ က ဥပမာနော်
8.ဒီဆော့ဝဲလ်ကို သူ့စက်မှာ Run မထားရင် သင့် သူငယ်ချင်းက ထိန်းချုပ်လို့ မရပါဘူး ဟိဟိ ကိုယ့်ပဲ ချုပ်တော့်နော် ကြုပ်ကျပ်တော့လိပေါ့နော် တားတားနဲ့ဆိုင်ဘူးနော်တားတားက လမ်းညွှန်တာ
Bluetooth ဖြင့် တစ်ယောက်သောသူ၏ အချက်လက်နှင့်ဖုန်းအလကားခေါ်ဆိုခြင်း
ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ W550i phone
သည် W800iphone ၏ဖုန်း
၎င်းzip file အား ဖုန်းထဲသို့သွင်းယူပါ။
ထို့နောက် ဖုန်းအား Bluetooth ဖွင့်ပါ။
အဲနောက် blooverII channel ကိုဖွင့်ပါ။bluetooth scan စတင်
ထို့နောက် w800iphone ကိုရွေးပါ။
Audit Result ရှိ အချက်လက်များကိုကြည့်ရှု
ဲပီး Dismiss ကိုနှိပ်ပါ။
Quick Configuration ရှိ
Do Bluedug ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပီး Apply ကိုနှိပ်ပါ။
BT info ပေါ်လာချိန်ဝယ် Connect ကိုနှိပ်ပါ။
Inquiry Device ကိုရွေးပြီး မိမိ Hack လိုသော
ဖုန်းအမျိုးစားဖြစ်သော W800iphone ကိုရွေးပြီး
Ringing-မိမိသည်တစ်ဖက်သောဖုန်း၏ Ring Toneကိုပြောင်းလဲခြင်း
Change Laguage- တစ်ဖက်သူ၏ဖုန်းဘာသာစကားကိုပြောင်းခြင်း
စသော Function ပေါင်းများစွာကိုတစ်ဖက်သူအားနစ်နာစွာ
Posted by Xai Yak at 13:47 No comments:
.အရင်ဆုံးဝိုင်ဖိုင် မဟက်ခင်မှာ Common view of Wifi ဆော့ဝဲလေးကို ဒီလိပ်စာလေးမှာ
အောက်ဖော်ပြပါပေးထားတဲ့ဇယာလေးက common view of wifi
ဆောဖ့်ဝဲသုံးလို့ရမည်.. adapter နဲ့ wifi ပစ္စည်းလေးပါတွေအပြင်သူနဲ့တွဲဖက်သုံးသင့်တဲ့..
Adapterအမျိုးအစား 802.11 Bands ချိတ်ဆက်သည့်ပုံစံ အလုပ်လုပ်သည့် ၀င်းဒိုးများ
Atheros AR5008, AR5009, AR92xx BGN or ABGN Integrated XP or higher
D-Link DWA-645 v.A1 BGN PC Card XP or higher
Dell Wireless 1505, 1510, 1515, 1520, 1530 ABGN Integrated Vista or higher See tech. notes 4
Dell Wireless 1702 BGN Integrated XP or higher
၎င်းနောက်မှာတော့...မိမိကွန်ပျူတာတွင်ရှိသော adapter ကိုသိရှိပြီး window အမျိုးစားကိုက်ညီပါကဆက်လက်လုပ်
အဲနောက် http://www.aircrack-ng.org ၀က်ဆိုဒ်လေးမှ aircrack-ng ဆော့ဝဲလေးကိုဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရပါမည်.
ခုနကဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရရှိထားတဲ့ common view application ရရှိလာမည့် .cap ဖိုင်လေးကိုအသုံးချပြီး access point
ရဲ့ password ကိုထုတ်ဖော်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်..
common view Wifi ဆော့ဖ်ဝဲလေးကို မိမိကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်လိုက်ပါ
အဲနောက် မိမိကွန်ပျူတာလေးအား wifi ခလုပ်ကိုဖွင့်ထားပါ.. external အနေဖြင့်သုံးသူများ wifi adapter ကို မိမိကွန်ပျူ
တာတွင်တပ်ဆင့်ပါ.. အဲနောက် wifi adpater ၏ driver ကိုတပ်ဆင်ပေးပါ.
SSID ကဘာလဲဆိုတော့ မိမိတို့wifi နဲကချိတ်ဆက်မိတဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်နာမည်အဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာပါ.
အဲနောက်ပုံတွင်အနီရောင်ကွင်းလေးဖြင့် ပြထားသော play icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။
နောက်ထပ်ပေါ်လာသော ဘောက်စ်တွင် start scanning ကိုနှိပ်ပါ။
ညာဘက်ကော်လံရှိ မိမိပတ်စဝေါ့ဖော်ထုတ်လိုသော ၀ိုင်ဖိုင်နာမည်သို့မဟုတ်အင်တာနက်ဆိုင်နာမည်ကိုရွေးပေးပါ။
အဲနောက် capture ကိုနှိပ်ပါ။
အဲလို capture ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ scanner dialog box ပျောက်သွားတဲ့အခါ...
capture ရိုက်ထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကို သိမ်းဆည်းဖို့အတွက်
setting>option>memory usage ကိုနှိပ်ပါ။ အဲနောက် maximum packets တွင် ၂၀၀၀၀ ရိုက်ထည့်ပါ။
maximum lines တွင် 20 ရိုက်ထည့်ပါ။ ပြီးနောက် ok ကိုနှိပ်ပါ။
အဲနောက် logging tab ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး autosaving တွင်အမှန်ချစ်လေးပေးပါ။
Maximun directroy size တွင် 2000ဖြည့်ပြီး Average log file size တွင် ၂၀ရိုက်ထည့်ပေးပါ။
2000 နှင့် 20 သတ်မှတ်ပြီးတာနဲ့ COncatenate Logs ကိုနှိပ်ပါ။ အဲနောက်မိမိနှစ်သက်ရာ folder
အလွတ်လေးကိုရွေးးချယ်ပြီး concatenate ကိုနှိပ်ပါ။ concatenate ကိုရွေးပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက်
မိမိရွေးချယ်ထားသော folder အလွတ်တွင် .ncf ဖိုင်လေးကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်..
၎င်း .ncf ဖိုင်လေးအား .cap ဖိုင် အဖြစ်ပြောင်းရန်အတွက်
်File>log viewer>load common view logs > .ncf ဖိုင်လေးကိုရွေးချယ်ပေးပါ။
File>Export>Wireshark/TCP dump ကိုနှိပ်ပြီး .cap ဖိုင်အဖြစ်သို့ရယူပါ။
Wifi Password ကို crack လုပ်ဖို့ရန်အတွက်
ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်လို့ရရှိတဲ့ Aircrack -ng folder လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါ..
၎င်း aircarck -ng folder>bin>Aircarck -ng GUI.exe ကိုနှိပ်ပါ။
အဲနောက် .ncf ဖိုင်ကနေ .cap ဖိုင်အဖြစ်ပြောင်းထားသော .cap ဖိုင်လေးကိုရွေးချယ်ပြီး
aircarck -ng မှ တဆင့် wifi password များ ရယှူနိုင်ပါပြီ..
Posted by Xai Yak at 13:40 No comments:
Start ကိုနှိပ်၍ Run ကိုနှိပ်ပါ။ (shortcut - Window Key+R)
Regedit ကိုရိုက်ပြီး OK ကိုနှိပ်ပါ။
အထက်ပါပြထားသည့်ပုံအတိုင်း “0009″ကိုနှီပ်ပြီး driver description(DriverDesc)
မှမိမိ၏ wireless Driver ကိုမြင်တွေ့နိုင်သည။်ထို့နောက် ၎င်း ပေါ်တွင် Right CLick
နှိပ်ကာ New ဆီသို့ရွေ့ပြီး String Value ကိုနှိပ်ပါ။အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ထို့နောက် Network Address လို့နာမည်ပေးပြီး ၎င်းနာမည်ပေါ်တွင်
Right CLick နှိပ်ကာ Modify နှိပ်ပြီး Value တွင် မိမိစိတ်ထဲမှာ ဆန္ဒရှီသော
ဂဏန်း ၁၂လုံး ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ထို့နောက် Registry ကိုပိတ်လိုက်ပါမည်။
CMD ကိုရိုက်ပြီး OK ကိုနှိပ်ပါ။
ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာသောbox တွင် ipconfig /all ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင် မိမိ၏ MAC address ပြောင်းလဲသွားမည်။
Posted by Xai Yak at 13:29 No comments:
သင့်ရဲ့ password ကို Hacker တွေ ရယူနိုင်ပုံ နှင့် ကာကွယ်နည်း
၁။ ။ကွန်ပျူတာခလုပ်ခုံ (ကီးဘုတ်) မှမှတ်တမ်းများရယူခြင်း..။(Log Keystoke)
ဒီနည်းကတော့ Key logger progrem တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီး ၄င်းကွန်ပျူတာမှာ
အသုံးပြုသူရိုက်သမျှစာတွေကို မှတ်ယူထားတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းနဲ့အသုံးပြုသူရဲ့ 
အင်တနက်ဆိုင်မှာ သုံးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ သတိထားစေလိုပါတယ်။(မိမိသုံးနေတဲ့ ကွန်ပျူတာ
မှာ Key Logger progrem ရှိမရှိ သိနိုင်ဖို့အောက်မှာကျွန်တော်ပြပေးထားပါတယ်။)
၂။ ။စကားဝှက်များရယူခြင်း ( Hack password)
အသုံးအများဆုံးနည်းတွေကတော့ SQL Injection နည်းနဲ့ အသုံးပြုသူတွေ စကားဝှက်
အပေးအများဆုံးတွေကို ခန့် မှန်းဝင်ရောက်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။Dictionary Attack &
Brute Force Attack ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
၃။ ။မလွယ်ပေါက်မှဝင်ရောက်ခြင်းနည်း(Gain backdoor)
မိမိကွန်ပျူတာရဲ့ အားနည်းချက်(ဟာကွက်) တွေကနေ ဝင်ရောက်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဝင်ရောက်ရာမှာလည်းနံပါတ်(၂) ကအတိုင်းပဲ Dictionary Attack & Brute Force Attack
(Dictionary Attack ဆိုတာကတော့ အဘိဓာန်ထဲမှာပါဝင်တဲ့စကားလုံးတွေသွင်းထဲ့ရင်း ဝင်ရောက်တဲ့နည်းလမ်းပါ။
Brute Force Attack ဆိုတာကတော့ Keyboard system မှာပါတဲ့စာလုံးတွေကို ပေါင်းစပ်ဝင်ရောက်တဲ့နည်းပါ။)
၄။ ။တစ္ဆေကွန်ယက်တစ်ခုဖန်တီးရယူခြင်း(Crate bonet computer)
ဒီနည်းကတော့နိုင်ငံအနှံအပြားက ကွန်ပျူတာတွေကိုbonet ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်စေပြီး
မိမိလိုအပ်တဲ့အချိန်ကြမှ သားကောင်ဆာဗာတွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို DDistribution
Deny of Service Attack(DDoS) လို့ ခေါ်ပါတယ်။
၅။ ။အီးမေးလ်များမှရယူခြင်း (Phishing)
ဒီနည်းကတော့ အသုံးပြုသူရဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာကို အတုအယောင်စာတွေပေးပို့ ကာ မိမိလိုအပ်တဲ့
ဆာဗာကိုလာရောက်စေပြီး စကားဝှက်တွေရယူနိုင်တဲ့နည်းပါပဲ။ဒါ့အပြင်ကွန်ယက်ထဲကနေ အီးမေးလ်တွေကို
ဝီကီလိစ်ဒ် ဖောက်ချခဲ့တဲ့ ကြေးနန်းတွေ၊အီးမေးလ်တွေက ဒီနည်းနဲ့သုံးခဲ့တာပါ။)
ဒါတွေကတော့မိမိpassword ကို Hacker တွေဘယ်လိုရယူနိုင်လည်းဆိုတာတွေထဲက နည်းလမ်းတစ်ချို့ ပါ။
ကဲဆက်ပြီးတော့ ဒါတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလည်းဆိုတာ ကျွန်တော်သိသလောက်ပြန်လည်မျှဝေပါမယ်။
၁။ ။တစ်ခါမှာမေးလ်မပို့ ဖူးသူ(မိမိနဲ့ မသိသူ) ပေးပို့ လာတဲ့အီးမေးလ်တွေကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။မေးလ်းပို့ပြီး
သူငယ်ချင်းတို့ ရဲ့ ပက်ဝက်(password) ကိုယူမယ့် progrem ကိုသူငယ်ချင်းတို့ ကိုယ်တိုင်နှိပ်မိအောင်
နှိပ်ချင်လာအောင် လုပ်တဲ့နည်းပါ။ဒါကြောင့် အီးမေးလ်စစ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ဆီဝင်လာတဲ့မေးလ်တိုင်း သေချာအောင်စိစစ်ပါ။
ဖွင့်ပြီးဖက်လို့ကြည့်လို့ တော့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အထဲကပါလာတဲ့ဖိုင်တွေ၊link တွေကို လုံးဝမနှိပ်မိပါစေနဲ့ ။မသင်္ကာဘူးထင်ရင်
တစ်ခါတည်း ဖျက်လိုက်ပါ။password ခိုးမယ့်ဖိုင်ဟာ သီချင်း၊ဗီဒီယို၊ဆော့ဝဲ၊လင့် တစ်ခုခုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါတွေက
Song+ Hack progrem(or) Movie+ hack progrem(or) Software+ Hack progrem တစ်ခုခုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင် ဖန်တီးထားတဲ့ Web Site ရဲ့ လင့်တစ်ခုခုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။(ဥပမာပေါ့ ဟိုမော်ဒယ်လ်ရဲ့ ဟိုကားကြည့်ချင်ရင်
ဒီမှာကလစ်လိုက်ပါဆိုပြီး ကိုယ်ကကြည့်ချင်ဇောနဲ့ ကလစ်လိုက်ရင် ဟိုကားမကြည့်ရပဲ ကိုယ့်ပက်ဝက်(password)
ပါသွားပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ဘော်ဒါကြီးတွေ သတိထားပါဗျ။)
၂။ ။ဒီတစ်ချက်ကတော့သူငယ်ချင်းတို့ စက်မှာ Gtalk သုံးရင် rememver password နေရာကို
အမှန်မှတ်လေးတစ်ခါတစ်လေပျင်းလို့ပဲခြစ်မိတယ်ထားပါဦး အဲ့ဒိပက်ဝက်(password ) ကို
ကွန်ပျူတာကမှတ်သွားမှာပါ။နောက်ပြီး Mozila နဲ့ မေးလ်စစ်တဲ့အခါတွေ၊web site တစ်ခုခုမှာ
မန်ဘာဝင်တာတွေမှာ remember ပက်ဝက်(password) တွေမလုပ်မိပါစေနဲ့ ။
၃။ ။Key Logger ဝင်မဝင်စစ်ပါ။
ဆိုင်မှာသုံးတဲ့သူတွေအနေနဲ့မိမိသုံးနေတဲ့စက်မှာ key logger software ကြိ်ုပြီး run
ထားလားဆိုတာစစ်ဆေးရပါမယ်။ဒီဆော့ဝဲက သူငယ်ချင်းတို့ keyboard မှာရိုက်သမျှစာတွေကို
မှတ်ထားတဲ့ဆော့ဝဲပါ။နောက်ပြီးကိုယ်ဝင်ထားတဲ့website တွေအားလုံး မိမိလုပ်ဆောင်ချက်
်အားလုံးလို့ ပြောပါတော့။အဲ့တာတွေအားလုံးကိုလိုက်မှတ်နေမှာပါ။ဒီတော့ကာ အဲ့ဒီဆော့ဝဲလေး
Ctrl+Shift+Esc(or)Ctrl+Alt+Del eJY Task Manager ကိ်ုခေါ်လိုက်ပါ။ Process
ဆိုတဲ့ tag ကိုနှိပ်ပြီး msdts.exe ဆိုတာကိုလိုက်ရှာကြည့်ပါ။ရှိတယ်ဆို၇င်တော့သေချာပါတယ်။
key logger software သုံးထားပါတယ်။ချက်ချင်းသာထပြန်လိုက်ပါ။မသုံးမဖြစ်သုံးရမယ်ဆိုရင်လည်း
ရပါတယ်။ တွေ့ နေတဲ့ msdts.exe ဆိုတာကိုကလစ်ပြီး End process ပေးလိုက်ပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့
key logger ကိုကာကွယ်နိုင်ပါပြီ။အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ task manager မှာရှိတဲ့
process tag ထဲကကိုယ်သုံးမဲ့ Gtalk,Vzo စတာလောက်ပဲ ထားပြီးတော့ကျန်တာအကုန်လုံး
Disable (or) End process ပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဘာလို့လည်းဆိုတော့သုံးနေတဲ့သူအနေနဲ့ 
ဒီဆော့ဝဲက ဘယ်လိုဖိုင်အမျိုးအစားကို Record လုပ်တယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး။ဒီတော့ကာ...
အန္တရယ်ကင်းဘေးရှင်း အားလုံးကို Disable (or) End Process ပေးပြီးကိုယ်သုံးချင်တာလောက်ပဲ
Task Manager မှာဆော့ဝဲရှာတဲ့ပုံလေးပါ...
Task Manager မှာ msdts.exe ဖိုင်ရိနေတယ်ဆိုရင်ပုံကအပြာရောင်လိုင်းလေးအတိုင်းဖိုင်ပေါ်ကိုကလစ်လိုက်ပါ
ပြီးရင်အောက်ကEnd process ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Posted by Xai Yak at 13:22 No comments:
ခဏခဏမေးတတ်ကြတဲ့ wifi ဟက်နည်းပါ တစ်ခုတော့ သိထားပါ မဟက်ခင် စစ်ရင်ပေါ်တယ်ဆိုတာ ကိုတော့ ခေါင်းထဲ အရင်ထည့်ထားပါ စစ်ကြည့်ရင်သိပါတယ် မေးထားတာ အများဆုံးမေးခွန်းမို့လို့ပါ တစ်ခါတလေလဲ တွေးမိပါတယ် အချောင်လိုက်ချင်သူတွေ ဒီလောက်တောင်ပေါသလားလို့ ပြောရင်တော့ဖြင့် ပညာရပ်ကိုတတ်ချင်လို့ပါ လို့တော့ပြောတာပဲ တကယ်တန်း ဒီလို မဟုတ်တာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်သိကြပါလိမ့်မယ်
Posted by Xai Yak at 13:16 No comments:
Posted by Xai Yak at 12:48 No comments: